asi zvinobuda mukanwa make ndizvo zvinon'oresa munhu.” Vadzidzi vake vakauya vakati kwaari, “Munoziva here kuti vaFarisei vakagumbuka pavakanzwa zvamakataura zviya.” Iye akati, “Chose chisina kudyarwa naBaba vangu chichadzipurwa. Varegei vakadaro, mapofu avatungamiri. Zvino kana bofu, rikatungamirira rimwe bofu vachawira vose mugomba.” Asi Pita akati kwaari, “Titsanangurirei muenzaniso uyu.” Jesu ndokuti, “Nemiwo hamunzwisise nhai? Hamuoni here kuti chinhu chose chinopinda mukanwa chinopfuura nomudumbu chichizobva chorasirwa kunze. Asi chinobuda mukanwa momunhu chinobva mumwoyo, ndicho chinon'oresa munhu. Nokuti mumwoyo ndimo munobva pfungwa dzakaipa dzinoti, umhondi noupombwe nokufeva nokuba nokurevera vamwe nhema uye kutaura zvakaipa nezvavamwe. Izvi ndizvo zvinon'oresa munhu asi zvokudya usina kushamba maoko hazvin'orese munhu.”
 “Nyatsoonai kuti hamushori mumwe wevaduku ava nokuti ndinokutaurirai kuti kudenga vatumwa vavo vanogara vachiona uso hwaBaba vangu vari kudenga. “Munofungei, ngatitii munhu ane zana rehwai. Imwe yadzo ikarasika, haasii here dzimwe makumi mapfumbamwe ane pfumbamwe dziri mumakomo achienda kundotsvaka iya yakarasika? Kana akaiwana, zvechokwadi ndinokutaurirai kuti anoifarira kupinda makumi mapfumbamwe ane pfumbamwe dzisina kumborasika. Saizvozvo Baba vangu vari kudenga havadi kuti mumwe wavadiki ava arasike. “Kana hama yako ikakutadzira, enda undotaurirana naye mhosva yake muri moga. Akakuteerera, watodzora hama yako.
 Paakatangisa kutaura nezvezvikwereti izvozvo, pakauiswa mumwe kwaari akanga aine chikwereti naye chegumi rezviuru zvemari yamatarenda. Nokuda kokuti akanga asingakwanisi kubhadhara, tenzi wake akati ngaatengeswe pamwechete nomudzimai wake navana nezvose zvaaiva nazvo kuti chikwereti chiripwe. Nezvo muranda uya akagwadama pasi achimuteterera achiti, “Tenzi ndiitireiwo mwoyo murefu. Ndichakudzorerai zvose zvazvo.” Tenzi womuranda uyu akamunzwira tsitsi ndokubva amuti aende zvake ndokumuregerera chikwereti chake chiya. Asi muranda mumwecheteyo paakanga avakubuda, akasangana nomumwe mushandi pamwe naye, akanga ane chikwereti kwaari chezana remari yamadhenari. Akabva amuti dzvi pahuro, achiti, “Ndibhadhare chikwereti changu.” Mumwe muranda uya mumwe wake akati pasi gwadagwa achimuteterera achiti, “Ingondiitirawo mwoyo murefu ndinokudzorera.” Asi iye akaramba ndokuenda ondomuisa mujeri kusvikira abhadhara chikwereti. Vamwe vake, varandawo pamwe naye, pavakaona zvakanga zvaitika, zvakavatsamwisa kwazvo. Vakaenda vakandotaurira tenzi wavo zvose zvakanga zvaitika. Ipapo tenzi wake akamudaidza, akati kwaari, “Iwe muranda wakaipa, ndakakuregerera chikwereti chose chiya nokuti wakanditeterera. Wanga usingafaniriwo here kunzwira urombo muranda pamwe newe sokukunzwira tsitsi kwandakakuitira?” Tenzi wake akashatirwa akamuendesa kuvarangi mujeri, “Kusvikira abhadhara chikwereti chake chose. Ndizvo zvichaitawo Baba vangu vari kudenga kuno mumwe nomumwe wenyu kana musingaregererani nemwoyo wose.” Jesu paakapedza kutaura zvinhu izvi, akabva kuGarirea akaenda mudunhu reJudhea mhiri kwaJorodhani.
 Umambo hwedenga hwakaita sasamusha akafumoenda kundotsvaka vashandi vokushanda mumunda wake wamagirepisi. Akawirirana navashandi mari yapazuva yedhenari, ndokuvatuma kumunda wake wamagirepisi. Akazobudazve paawa yechipfumbamwe mangwanani akaona vamwe vakamira zvavo pamusika. Akavati, “Imi endaiwo mumunda wamagirepisi. Ndichakupaiwo zvinokodzera.” Saizvozvo vakaenda. Akazobudazve paawa yegumi nembiri masikati neawa yechitatu masikati akaita zvimwechetezvo. Panguva inenge yechishanu zuva ravakuda kudoka akabuda akaona vamwe vakamira zvavo. Iye akati kwavari, “Ko munodarirei kungomira zvenyu kudai zuva rose musina chamuri kuita?” Vakati kwaari, “Nokuti hapana atitora kuti atipewo basa.” Iye akati, “Nemiwo endaiwo mumunda wamagirepisi.” Kumanheru muridzi womunda wamagirepisi akati kuno mutariri wake, “Chidaidza vashandi uvape mibayiro yavo utangise novokupedzisira uchigumisira nevokutanga.” Vaya vakapiwa basa paawa yechishanu manheru pavakauya, mumwe nomumwe wavo akagamuchira mubayiro wapazuva uya wedhenari. Vokutanga vaya pavakauyawo, vakafunga kuti vachagamuchira yakawanda, asi mumwe nomumwe wavo akagamuchira dhenari. Pavairigamuchira vakanyunyutira saimba uya vachiti, “Ava vokupedzisira vashanda kweawa imwechete chete asi imi mavaenzanisa nesu, isu tabinduka zuva rose tichipiswa nezuva.” Asi iye akapindura mumwe wavo achiti, “Shamwari, handisi kukutadzira. Hauna kubvumirana neni here mubayiro wemari yedhenari? Iwe ingotora yako uende. Ndini ndasarudza zvangu kupa uyu wokupedzisira yakaenzana neyandakupa. Handibvumirwi here kuita madiro nezvinhu zvangu kana kuti une shanje nemwoyochena wangu here? Saizvozvo vokupedzisira vachava vokutanga, vokutangawo vachava vokupedzisira.”
 “Munofunga kuti kudii? Mumwe murume aiva navanakomana vaviri, akaenda kuna wokutanga wacho akati, ‘Mwanangu, enda nhasi undoshanda mumunda wamagirepisi.’ Iye akapindura achiti, ‘Handidi,’ asi pashure akazozvidzora akaenda. Akaenda kune wechipiri akataura zvimwechetezvo. Mwanakomana akapindura achiti, ‘Ndinoenda changamire,’ asi haana kuenda. Pakati pavaviri ava ndoupi akaita zvaidiwa nababa vake?” Ivo vakati, “Wokutanga.” Jesu akati kwavari, “Zvechokwadi, ndinoti kwamuri, vateresi nepfambi vachakutangirai kupinda muumambo hwaMwari. Nokuti Johani akakuunzirai gwara roururami asi imi hamuna kutenda maari asi vateresi nepfambi vakatenda maari. Kunyange pamakazviona hamuna kutendeuka muchitenda kwaari.
 “Teererai munzwe mumwe muenzaniso. Kwaiva nomumwe saimba akarima munda wamagirepisi ndokuukomberedza noruzhowa. Akacheramo guvi rokusvinira waini. Akavakawo nharire ndokuupa kuna vamwe varimi vokuushandisa vachimubhadhara, iye ndokuenda zvake kune imwe nyika. Nguva yomuchero payakanga yava kusvika, akatuma varanda vake kuna vaya vaishandisa munda wake kuti awanewo muchero wake. Vaishandisa munda wake vaya vakabata varanda vake, mumwe vakamurova, mumwe vakamuuraya, mumwe vakamutaka namabwe. Akatumazve vamwe varanda, vakatowanda kupinda vokutanga vaya. Vakaita zvimwechetezvo kwavari. Mushure mezvo akatuma mwanakomana wake kwavari achiti, ‘Vacharemekedza mwanakomana wangu.’ Vaya vaishandisa munda pavakaona mwanakomana uya vakati pachavo, ‘Uyu ndiyeka mugari wenhaka, uyai timuuraye tizotora nhaka yake.’ Vakamutora vakamukanda kunze kwomunda wamagirepisi vakamuuraya. Saizvozvo, kana muridzi womunda wamagirepisi akauya achaitei kune vokushandisa munda wake vaya?” Ivo vakati kwaari, “Achaparadza vanhu vakaipa ava norufu rwakaipisisa, achazopa munda wamagirepisi iwoyo kuna vamwe vokuti vaushandise vachimubhadhara vachimupa michero panguva yayo.” Jesu akati kwavari, “Hamuna kumboverenga here muMagwaro Matsvene kuti, ‘Dombo rakarambwa navavaki ndiro rakazova romusimboti rapakona? Uku kuita kwaTenzi uye kunotishamisa zvikuru.’ Naizvozvo, ndinoti kwamuri umambo hwaMwari muchahutorerwa huchipiwa kuno rudzi runobereka muchero yaho.” Vapristi vakuru navaFarisei pavakanzwa mienzaniso yake, vakazviona kuti aireva ivo. Vaida kuti vamusunge asi vakatya uzhinji hwavanhu nokuti vaimutora somuporofita.
 Jesu akataurazve kwavari nemienzaniso achiti, “Umambo hwedenga hungafanidzwe namambo akaitira mwanakomana wake mabiko omuchato. Akatuma varanda vake kundodaidza avo vakanga vakokwa kumabiko omuchato; asi havana kuda kuuya. Akatumazve vamwe varanda achiti indotaurirai vakakokwa vaya kuti, ‘Onai, ndagadzirira mabiko angu, ndabaya mombe, ndikabaya zvimhuru zvangu zvakakora. Zvose zvagadzirirwa. Chiuyai kumabiko omuchato.’ Asi ivo havana kumboita hanya nazvo, vakabva vatoenda zvavo, mumwe kupurazi yake, mumwe kushawo yake. “Vamwewo vakatobata varanda vake vakavafumura vakavauraya. Mambo akashatirwa akatumira masoja ake akaparadza mhondi idzodzo. Akapisa guta ravo. Akazoti kuvaranda vake, ‘Muchato wagadzirirwa asi vaya vakakokwa vanga vasina kukodzera. Saka endai pamharadzano dzemigwagwa mundokoka kumabiko omuchato vose vamunenge makwanisa kuwana.’ Varanda vaya vakafamba nemigwagwa vakakokorodza vose vavakakwanisa kuwana, vakanaka navakaipa. Saizvozvo zimba romuchato rakazara navakanga vakokwa. “Mambo paakauya kuzoona vaeni, akaona imomo mumwe munhu akanga asina hanzu yomuchato. Akati kwaari, ‘Shamwari, wapinda seiko muno usina hanzu yomuchato?’ Akabva aomerwa nerokutaura. Mambo akati kuna vashandi vake, ‘Musungei maoko namakumbo mumukande murima rokunze.’ ” Ikoko vanhu vachachema nokurumanidza mazino. Nokuti vazhinji vanodaidzwa asi vashoma ndivo vanosarudzwa.
 “Dzidzai chidzidzo chinobva kumuonde. Kana bazi rawo rotunga, pfumvudza yobuda, munobva maziva kuti zhizha rava pedyo. Naizvozvo imiwo kana moona izvi zvose, zivai kuti iye ava padyo, atova pamusuo chaipo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri chizvarwa ichi hachimbopfuuri, zvinhu izvi zvisati zvaitika. Denga napasi zvichapera asi mazwi angu haambopfuuri.
 “Ndoupi zvino muranda wakatendeka uye akangwara anoiswa pabasa natenzi wake rokutarira vomumusha make kuti avape zvokudya zvavo nenguva kwayo? Akakomborerwa muranda uyo anoti kana tenzi wake wouya anomuwana achiita saizvozvo. Zvechokwadi, ndinoti kwamuri achamuita mukuru wezvose zvaanazvo. Asi kana muranda uya akaipa, achizviti mumwoyo, ‘Tenzi wangu anonoka,’ iye wotanga kurova vamwe varanda naye, achidya nokunwa nezvidhakwa; tenzi womuranda uyu achauya pazuva raasingamutarisiri uye panguva yaasingazivi, omuranga achimuisa pamwechete navanyengedzi, ikoko vanhu vachachema vachirumanidza mazino.
 “Umambo hwedenga huchafananidzwa navasikana vane gumi vakatora marambi avo vakaenda kundochingura muwani. Vashanu vavo vakanga vasina kungwara, vamwe vashanuwo vakanga vakangwara. Vakanga vasina kungwara vaya, pavakatora marambi avo, havana kutakura mamwe mafuta. Asi vakachenjera vakatakura zvigubhu zvamafuta pamwechete namarambi avo. Muwani paakanonoka vakanzwa hope ndokubva vakotsira. Pakati pousiku pakaridzwa mhere yokuti, ‘Muwani wouya, budai mumuchingure.’ Vasikana vaya vose vakamuka vakabatidza marambi avo. Vasina kungwara vakati kuna vakangwara, ‘Tipungurireiwo mafuta enyu nokuti marambi edu ava kuda kudzima.’ Asi vakangwara vakapindura vachiti, ‘Pamwe haangazotikwanira isu nemi. Zvirinani kuti muende kuna vanotengesa mundozvitengera.’ Pavakanga vaenda kundotenga, muwani ndiye vhu kusvika. Vaya vakanga vakagadzirira vakapinda naye mumabiko omuchato. Gonhi ndiye dhwa kuzarirwa. Mushure mezvo, vamwe vasikana vaya vakauya vachiti, ‘Tenzi, Tenzi tizarurireiwo.’ Asi iye akapindura achiti, ‘Zvechokwadi ndinoti kwamuri handikuzivii. Naizvozvo garirirai nokuti hamuzivi zuva kana nguva yacho.’